Sidee loo cusbooneysiiyaa Samsung Galaxy Tab 7 Android 5.1.1 | Androidsis
Inkastoo dad badani sidaas u maleeyaan Asalka Samsung Galaxy Tab 7, gabalkaas oo ah sibiibix taasoo ahayd bilowga aaladaha hadda loo yaqaan FaleeboWaa Terminal duugoobay oo aan awoodin inuu nagu soo bandhigo khibrad wanaagsan oo Android ah, maanta, casharkaan cusub waxaan ku tusi doonaa inaysan taasi ahayn kiiska oo aan wali wax badan ka heli karno shirkadan weyn ee Samsung.
Waana casharradan cusub ee wax ku oolka ah, waxaan ku barayaa sida saxda ah ee loo maro cusbooneysii Samsung Galaxy Tab 7 ilaa Android 5.1.1 Lollipop, taasi waa, nooca ugu dambeeyay ee Android illaa maanta. Markaa haddii aad tahay milkiilaha mid ka mid ah noocyadan caalamiga ah ee Samsung Galaxy Tab 7 ama si fiican loogu yaqaanno P1000, Waxaan kugula talinayaa inaadan ka lumin hal xaraf oo casharkaan ah maxaa yeelay weli wax badan ayaa ka dhiman oo la siinayo terminalkan Samsung ee xiisaha leh
Kahor intaadan sii wadin casharkaan wax ku oolka ah ee aan ku baran doonno sida loo sameeyo cusbooneysii Samsung Galaxy Tab 7 ilaa Android 5.1.1 Lollipop adoo adeegsanaya Rom OmniRom ku saleysan gebi ahaanba CM12.1, waa inaan taas kaaga digno Tani waxay faa'iido u leedahay oo kaliya ansax u tahay qaabka caalamiga ah, taasi waa, qaabka loo yaqaan tixraaca P1000 gaar ah oo gaar ah.
2 Faylasha loo baahan yahay si loo cusbooneysiiyo Samsung Galaxy Tab 7 ilaa Android 5.1.1 Lollipop
3 Habka dhalaalka
3.1 1º - Flashing Kit Kat Rom si aad u hesho TWRP Recovery oo muhiim u ah iyo qaybaha Kit Kat
3.2 2aad - Nalalka OmniRom Android 5.1.1 Rom iyo biligleynaya Gapps iyo SuperSu
4 Dib-u-eegista Fiidiyowga ee Android 5.1.1 ee Samsung Galaxy Tab 7 iyo sharraxaadda habka rakibaadda tallaabo tallaabo ah
A Samsung Galaxy Tab 7 P1000 taasi waxay ku jirtaa nooca android Caano-boobka, CM11 ama nooc kasta oo ka mid ah noocyadeeda.
Hayso boosteejada Xidid iyo leh Soo kabasho la beddelay.
A kaabta nadroid waaba haddii duqsigu nabad qabaa.
Kaydinta dhammaan codsiyada iyo xogta in aan ilaashano.
Hayso Qalabaynta USB laga hawlgeliyey dejiyaha horumariyaha.
Faylasha loo baahan yahay si loo cusbooneysiiyo Samsung Galaxy Tab 7 ilaa Android 5.1.1 Lollipop
Faylasha loo baahan yahay ayaa ku kooban afar fayl oo lagu cadaadiyey zip taasi waa inaan kala soo baxnaa oo aan nuqul ka sameysannaa adigoon hoos u dhigin asalka xusuusta gudaha ee Samsung Galaxy Tab 7 waxaan rabnaa inaan cusbooneysiino.
Rom OmniRom KitKat oo leh TWRP Recovery oo muhiim ah.
Rom OmniRom Android 5.1.1 Nalalka.
Google Gapps ee loogu talagalay Android 5.1.
1º - Flashing Kit Kat Rom si aad u hesho TWRP Recovery oo muhiim u ah iyo qaybaha Kit Kat
Waxaan dib ugu bilaabaneynaa qaabka Soo-kabashada oo waxaan raacnaa tilmaamahan:
Advanced / Masax kaydka dalvik
Ku rakib oo xulo zip-ka 'Kitni' OmniRom KitKat, oo ah Android 4.4.4, waan xaqiijineynaa rakibidda oo hubaal waxay na siin doontaa nooc khalad ah rakibaadda.
Mar labaad rakib oo waxaan dooranay Zip-ka 'OmniRom Kit Kit markale', waxaan xaqiijineynaa rakibideeda markan waxaan dib u bilaabi doonnaa kiniinka dhowr ilbiriqsiyo ka dib laakiin markan TWRP Recovery cusub.
Mar labaad rakib oo iftiimi zipka 'OmniRom Kit Kat zip' markii ugu dambeysay,
Reboot Nidaamka hadda.
Nidaamka reboot waxay qaadan doontaa ilaa 15-20 daqiiqo, daqiiqada Galaxy Tab si buuxda dib u soo kabasho, Waxaan mar labaad ku soo galaynaa habka Soo-kabashada oo waxaan ku sii wadaynaa qaybta labaad iyo tan ugu dambeysa ee casharrada taas oo ah qaybta aan ku cusboonaysiinno Samsung Galaxy Tab ilaa Android 5.1.1 Lollipop.
2aad - Nalalka OmniRom Android 5.1.1 Rom iyo biligleynaya Gapps iyo SuperSu
Tirtir, waxaan xulanaa masaxday gudahana waxaan ku calaamadeyneynaa dhammaan xulashooyinka marka laga reebo xusuusta gudaha ee Galaxy Tab oo ah meesha aan u malaynayno inaan ku haysanno shaashadda lagama maarmaanka u ah cusbooneysiinta Tab.
Ku rakib oo dooro zip ka Android 5.1.1, Waxaan ku xaqiijinaynaa adoo gujinaya baarka oo haddiiba naloo soo bandhigo nooc khalad ah, waxaan dib u cusbooneysiineynaa habka rakibidda mar labaad.
Waxaan dib ugu laabaneynaa xulashada Ku rakib Waxaan shidnaa Android 5.1.1 Gapps
Waxaan mar kale dib u laabaneynaa Ku rakib Mar labaad waxaan ku dhammeyneynaa biibilkiisa SuperSu.
Masax kaydka iyo dalvik iyo Nidaamka Reboot.
Haddaba si sug ilaa 20 daqiiqo oo dheer ilaa dib loo bilaabayo dhameystirka Samsung Galaxy Tab 7 P1000 kaas oo aan haddaba ku haysan doonno nooca ugu dambeeya ee Android Lollipop 5.1.1 inta ay noqon karto saaxiibada Samsung.
Dib-u-eegista Fiidiyowga ee Android 5.1.1 ee Samsung Galaxy Tab 7 iyo sharraxaadda habka rakibaadda tallaabo tallaabo ah
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Samsung » Cajiib ah !! Sida loo cusbooneysiiyo Samsung Galaxy Tab 7 ilaa Android 5.1.1 Lollipop (qaabka P1000)
Wax u fur tab3 p5200?
Wanaagsan kuwa naga mid ah ee sii wadaya isticmaalka TAB 7 P1000 waa sida cusub, aad ayaad u mahadsantahay
Ku jawaab aprincep
Asalkii la odhan ah Andrés.
Waxaan u socdaa kuwa si aan u arko sida ay wax u socdaan, mahadsanid.
Waxaan haystaa P1000L wax dhibaato ah oo ku saabsan cusbooneysiinta? dhanka kale, waan ka dheregsanahay dhibaato markii aan telefoonka u isticmaalayay fariin "habka com.android.phone wuxuu u istaagay si lama filaan ah. Mar kale isku day"
Aniga ayaa wacaya, fariinta ayaa u muuqata waan aqbalay, waxay ka goysaa shabakada, way qaadataa (mararka qaar waxay kuxirantahay ilaa daqiiqad 4 ilbidhiqsi oo kale) way isku xirtaa waanan sameyn karaa wicitaanka xiga, laakiin waa dhib markii aan haysto inaad dhowr jeer wacdo midba midka kale. Ma jiraan wax aan qaban karo?
Macluumaadka ayaa leh:
MUUQAAL MAYA: GT-P1000L
QAYBTA FIRMWARE: 2.3.3
QAYBTA BASBAND: P1000LVJJP1
QODOBADA KERNEL: 2.6.35.7 se.infra@SEP-40 # 2
LAMBAR DHISME: GINGERBREAD.UTJP7
Waxaan rajeynayaa inaad i caawin karto. Salaan iga timid Mexico
Ku jawaab caadadii1095
Subax wanaagsan, saaxiib Fernando. Su'aashayda ka socota Caracas, Venezuela ayaa ah sida loo cusbooneysiiyo GT-P1000N A3LGGTP1000 illaa Android 5.1.1 Maxaa dhacaya haddii aan khalad ku sameeyo howsha
Jawaab Juan Bta Borrero M
SAAXIIB Waxaan jeclaanlahaa inaan ogaado hadii wax barashadaani adiga kaaga shaqeysay si aad u cusboonaysiiso Moodelkii GT-P1000N. JAWAABTAADA WAAN RAJEYAY FADLAN FADLAN
Jawaab Raul Fuentes
TIJAABO LA'AAN SIDII AY U SHAQAYSATO, KALIYA WAXAN DHIHI KARAA:
MAHADSAN HAL BILYAN, OO KA YIMID SHAXDA KELIYA Haysatay SIDII AY XAASAS AHAYD HADA BAAN LEEYAHAY MIIL CUSUB-
Ku jawaab JOSE CARLOS
Waxaan doonayay inaan ku waydiiyo, ma awoodday inaad xalliso booska kaydinta oo aad barnaamijyada ugu wareejiso kaarka sd-ka dibedda Isla sidaas ayaa igu dhacda.
Waxaan isticmaalay kaniiniga dhowr maalmood aad ayaan ugu faraxsanahay natiijada anigoo tixgelinaya in bil ka hor kaliya aan u isticmaalay miisaan ahaan. Tan waxaan u iri maxaa yeelay sida iska cad Samsung Galaxy Tab weli waxoogaa cadaalad ah ayuu u yahay faa'iidooyinka aan wada ognahay.
Marka laga hadlayo cusbooneysiinta, cilladda kaliya ee aan arko ayaa ah in codsiyada aan loo gudbin karin kaarka sd ama xusuusta caawiyaha ah. Waxaa jira kaliya 1,38 GB wadarta guud ee ka hartay si loo keydiyo barnaamijyada. Waxay kaloo leedahay 12,83 GB oo gudaha ah oo aan la isticmaali karin.
Ma lagu xalin karaa si uun ???????
Waad salaaman tahay, waxaan hayaa samsung galaxy tab 7.0 oo lagu daray GT-P6200L, android 3.2, maxaa cashar ah oo aan raacayaa si aan u cusbooneysiiyo?
Ku jawaab Yeluxy
Wax la mid ah ayaa igu dhaca aniga, ma jirto wado lagu rakibo 12,83GB ee kiniinku leeyahay? Waxay si fiican ula shaqeysaa qaabkan, laakiin ma awoodo inaad rakibo waa xabadka ...
Waad salaaman tahay saaxiib, waxaan haystaa P1000n, casriyeyntaani miyay ku habboon tahay qaabka kiniinkayga?
Ku jawaab Carlos Ante
hello iga raali noqo jaahilnimadayda, marka hore waa inaan nuqul ka gaystaa faylasha faylka ee ku jira xusuusta gudaha ee taleefanka, ka hor intaanan samayn tirtirka iyo waxaas oo dhan? mise waa la tirtiraa marka hore kadibna faylasha ayaa la soo guuriyaa?
Jawaab Paul de la Fuente
WAAD SAMEYSAY, HADDII AAD SAMEYSAY MA FAHAN KARTAA SIDA AAD U SAMEEYSID, WAAN LEEYAHAY SHAQO ISKU MID AH, MA QABATAA QASHINKA SHAQADA AMA KUU XIRAN KOMBUUTARKA?
Bawlos, waan soo noqday, sidee u sameysay?
Haddii aad iga caawin karto sida loo rakibo fadlan, mahadsanid.
Waa salaaman tahay Francisco, waa su'aal haddii aad rabto inaad ku laabato rootiga sanjabiilka 2.3.3 markale, waa sidee nidaamka aan sameyno? Waan qaddarin doonaa rtaada. Salaan!
Richard (@Rabbidaa) dijo
Ku-biirinta wanaagsan, Waxay si buuxda ugu shaqeysay Nuqulka P1000M, Salaan Guatemala
Jawaab Richard (@RabbidLink)
Nidaamkii oo dhami wuxuu u dhacay si habsami leh, hadda waxaan ugu dambeyntii haystaa kiniin waxtar u leh wax. Mahadsanid !!!!!!
Waxay ii qabatay waxyaabo yaab leh P1000N (Argentina) A .Sida aan u dhahno reer Argentina… SOS UN CAPO !!!!!
Jawaab Ariel Ricupero
Ma haysatay android 2.3.6? Soo kabasho noocee ah ayaad yeelatay?
hi waxaan haystaa gt-p1000
QAYBTA FIRMWARE: 2.2
QAYBTA SADDEXA: P1000XXJM6
QODOBADA KERNEL: 2.6.32.9
xididka @ SEP-53 # 1
ISKU-DARRADA Maya .; FROYO XXJM6
Ma ku cusbooneysiin kartaa adoo raacaya talaabooyinkan adiga oo aan khatar ugu jirin inaad xannibto?
Shalay waxaan ka soo qaaday guriga walaashey p1000 oo aan halkaas ku dhaafey, waxaanan cusboonaysiintaan ka sameeyey, kaniini hadda wuu shaqeeyaa, waxaad dhigi kartaa barnaamijyada sida instagram, in kasta oo facebook kani aanu aniga igu rakibnayn oo ay tahay inaan dhigo suugaanta. . Waxaan rabay in aan waydiiyo in aan unroot karo ama wax qaban karo si markaan markaan appka u rakibo, aanan u helin in uusan ahayn roman rasmi ah
Fiid wanaagsan, waayo P1000L waa casharradu waxtar bay leeyihiin mise waxaad leedahay mid aan ku cusbooneysiin karo? Salaan iyo mahadsanid
DIGITAL TV MA SHAQEEyaa?
Jawaab LUIS PUIG
aan jeclahay dijo
Kiniinkeygu wuxuu ahaa shaashad madow oo keliya fiiri furayaasha hoose
qof iga caawiya inaan soo nooleeyo 🙁
Hambalyo rabitaan, waan ku caawin karay, raac casharkaan, wuu ila shaqeeyey, kani waa isku xirka https://www.youtube.com/watch?v=QsZf3r05u2Y
Aad baad ugu mahadsan tihiin wax walba, waxay si fiican uga shaqeysaa Samsung Model P-1000N (Guatemala), faahfaahsan kaliya, ma awoodi kari waayey inaan facebook rakibo, si walba oo aan uga baahdo rakib dhib la'aan, salaan iyo mahadsanid markale
Jawaab Luis Fernando
Way i caawiyaan?
Waxaan hayaa samsung galaxy tab GT-P1000 3G, waxay leedahay boos lagu dhejiyo micro sd iyo mid kale oo lagu dhejiyo kaarka sim si loo sameeyo loona waco, hadda waxay ku jirtaa nooca 2.3.3 Gingerbread. Noocee ah ayaa loo cusbooneysiin karaa? Wax walba ma shaqeyn lahaayeen oo wicitaano ma la sameyn karaa oo la heli karaa? Kiiska qaabaynta warshad ahaan, nidaamkee ayaa ah kan la ilaaliyo? Hadday dhibaatooyin jiraanna, miyaan dib ugu laaban karaa nooca rasmiga ah ee sinjibiilku? Sidee nidaamka rasmiga ah loogu soo ceshan karaa?
Fadlan jawaab ka sug qof garanaya hubaal.
Iga raali noqo, kaniinigu iima oggolaan doono inaan rakibo sinka
markaan rakibo TWRP taabashadu ma shaqeyso halkaasna kama dhicin wixii dhibaato noqon kara. ama xaalada ugu xun ma aqaano inaad hayso casharro lagu rakibo romanka asalka ah original
Isla waxbaa igu dhacay aniga oo ah Amolina, fadlan, wax xal ah?
Miyaa lagu rakibi karaa P1000N leh android 2.3.6?
Runtii aad baan uga helay muuqaalka, midna waan rabaa oo aan cusboonaysiiyaa, Mr. Francisco Ruiz, fadlan ma ii soo diri kartaa 4ta feylood, waxaan isku dayayaa inaan soo dejiyo mana awoodo, aad baad u mahadsan tahay.
Jawaab Ricardo yunez
Maxaa ku dhacaya xiriiriyeyaasha cusbooneysiinta android-ka ee qashinku ku raran yahay oo aan la soo dejin karin ... ma leeyihiin fayrasyo?
Ku soo jawaab Pas
Ugudambeyn waan ku guuleystey, oo ah 10 macalinkaaga ah, in kastoo aan dhaho waxay igu kacday aniga, kuwa naga mid ah oo aan fikrad badan haysan, waa xoogaa culeys, laakiin hey, way u qalantay, 🙂
Waad salaaman tihiin, casharka cusbooneysiinta ayaa ah mid aad u wanaagsan, laakiin waxaan hayaa kiniin Samsung Galaxy Tab 2 7.0 ah nambarkiisuna waa GT-P3110, sidee u yahay cusboonaysiintaadu nooca ugu dambeeyay ee android mahadsanid
Aad ayaan ugu mahadcelinayaa casharkaan waan sii wadi karaa isticmaalka kiniinka aan u maleynayay inuu hore u dhacay, runtiina waa dillaac, sii wad
Jawaab robert Arias